စိတျမရှညျပဲကြျောတကျလိုကျတော့ ပှဲခငျြးပွီးသရေပွီပေါ့ ကားမောငျးသူမြား စိတျရှညျရှညျထားပါ - MM Live News
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ၁၄.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့လည် ၃နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှည်းကူးမြို့နယ် အမှတ်(၃)လမ်းအတိုင်း အမှတ်(၃)လမ်းဆုံဘက်မှေ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းဘက် (မြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်) အတိုင်း ယာဉ်မောင်းအမည်မသိ၊ အဘအမည် ၊နေရပ်လိပ်စာ စုံစမ်းဆဲ
အသက်(၃၀)ခန့် အမျိုးသားတစ်ဦးမောင်းနှင် လာသော YGN9I……Fielderခဲရောင်အငှားယာဉ်သည် အမှတ်(၃)နှင့် အမှတ်(၇)လမ်းဆုံ အနီးတွင်ရှေ့က လားရာတူမောင်းနှင်နေသော ယာဉ်တစ်စီးကို ဝဲဘက်ခြမ်းကကျော်တက်မောင်းနှင် စဉ် တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောအတွင်းရောက်ရှိသွားပြီး အမှတ်(၃)လမ်းမအတိုင်းအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဘက်မှ …..
လှည်းကူးဘက်သို့ တောင်မှမြောက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဟင်နရီထွန်းကျော် (၂၇)နှစ်၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ချောင်းဝ(၂)ရပ်ကွက် ၊ရွှေလောင်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနေသူမောင်းနှင်လာသော BGO7N/…….CONDOR အစိမ်းရောင်အငှားယာဉ်ကို အရှိန်မထိမ်းနိုင်ဘဲ ၀င်ရောက်တိုက်မိသဖြင့် ယာဉ်နှစ်စီးပျက်စီးကာ ….
အမည်မသိအသက်(၃၀)ခန့် ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားသည် ဦးခေါင်းနောက်စေ့ပေါက်ပြဲ၊ ဝဲမျက်လုံးဘေးပေါက်ပြဲ၊ ဝဲလက်မောင်းဖူးရောင်၊ ဝဲယာဒူးပေါက်ပြဲကာ အခင်းဖြစ်နေရာ တွင်သေဆုံးသွားကာ YGN5I/……Fielder အငှားယာဉ်မှာရှေ့ခေါင်းကျေမွ ၊ရှေ့ဂွေကျိုးကာခန့်မှန်း (၂၀)သိန်းဖိုးနှင့် BGO7N/….CONDOR ကားမှာ…..
ယာဘီးကျွတ်၊ ဝဲဘေးခွေးကာ ပိန်ချိုင့်ကာ (၁၀)သိန်းဖိုး ခန့်ဆုံးရှူံးရသောကြောင့် ယာဉ်ပေါ့ဆ စွာမောင်းနှင်သူ အမည်မသိသေဆုံးသူကို အရေးယူပေးပါရန် တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာ လှည်းကူးရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၅၁/၂၀၁၉ပဒ်မ ၃၀၄-က/၂၇၉အရ အမှုရေးဖွင့်ကာ အမှုစစ်ရဲအုပ်အောင်လှိုင်ထွန်း၊ ယာဉ်မှုစစ်၊ယာဉ်ထိမ်းတပ်ဖွဲ့စု (၆၇)ကလက်ခံစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
စိုးမြင့်(လှည်းကူး)S.Hသတင်းဌာန၊ ရှုထောင့်မှုခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ်၊ အမှန်တရားဂျာနယ်
အမှုဖွဈစဉျမှာ ၁၄.၁၂.၂၀၁၉ရကျနလေ့ညျ ၃နာရီ ၃၀မိနဈအခြိနျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ၊မွောကျပိုငျးခရိုငျ၊ လှညျးကူးမွို့နယျ အမှတျ(၃)လမျးအတိုငျး အမှတျ(၃)လမျးဆုံဘကျမှေ အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးကှငျးဘကျ (မွောကျဘကျမှတောငျဘကျ) အတိုငျး ယာဉျမောငျးအမညျမသိ၊ အဘအမညျ ၊နရေပျလိပျစာ စုံစမျးဆဲ
အသကျ(၃၀)ခနျ့ အမြိုးသားတဈဦးမောငျးနှငျ လာသော YGN9I……Fielderခဲရောငျအငှားယာဉျသညျ အမှတျ(၃)နှငျ့ အမှတျ(၇)လမျးဆုံ အနီးတှငျရှကေ့ လားရာတူမောငျးနှငျနသေော ယာဉျတဈစီးကို ဝဲဘကျခွမျးကကြျောတကျမောငျးနှငျ စဉျ တဈဖကျယာဉျကွောအတှငျးရောကျရှိသှားပွီး အမှတျ(၃)လမျးမအတိုငျးအောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးဘကျမှ …..
လှညျးကူးဘကျသို့တောငျမှမွောကျသို့ ယာဉျမောငျး ဟငျနရီထှနျးကြျော (၂၇)နှဈ၊ ဂန်ဓမာလမျး၊ခြောငျးဝ(၂)ရပျကှကျ ၊ရှလေောငျးမွို့၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနသေူမောငျးနှငျလာသော BGO7N/…….CONDOR အစိမျးရောငျအငှားယာဉျကို အရှိနျမထိမျးနိုငျဘဲ ဝငျရောကျတိုကျမိသဖွငျ့ ယာဉျနှဈစီးပကျြစီးကာ ….
အမညျမသိအသကျ(၃၀)ခနျ့ ယာဉျမောငျး အမြိုးသားသညျ ဦးခေါငျးနောကျစပေ့ေါကျပွဲ၊ ဝဲမကျြလုံးဘေးပေါကျပွဲ၊ ဝဲလကျမောငျးဖူးရောငျ၊ ဝဲယာဒူးပေါကျပွဲကာ အခငျးဖွဈနရော တှငျသဆေုံးသှားကာ YGN5I/……Fielder အငှားယာဉျမှာရှခေ့ေါငျးကမြှေ ၊ရှဂှေ့ကြေိုးကာခနျ့မှနျး (၂၀)သိနျးဖိုးနှငျ့ BGO7N/….CONDOR ကားမှာ…..
အောငျမွငျမှုတှပှေပေို့ကျပွီး အမပွေနျလာခြိနျ လယောဉျမှုးကွီး ဦးအောငျပို ရေးတဲ့စာ…
တိုက်ပွဲမှာကျည်ဆံမှန်တဲ့ လူနာကို အရပ်သားပါဆိုပြီး အစိုးရ ဆေးရုံကိုလာတင်တော့ လမ်းမှာတင် အဖမ်းခံရ
ကျပ် (၁၀၀၀၀) တန်အတုကိစ္စ အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအမှု အပြီးအပြတ်လွတ်…
တစ်ခါကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးစောနိုင်(ရှမ်းပြည်) (ခ) ဦးစန္ဒိမာ ပျံလွန်တော်မူပြီ…